Maamulaha Mashruuca iskaa wax u qabso | Abuurista khadka tooska ah
Maamulaha Mashruuca iskaa wax u qabso
Shaqada iskaa ah waxay noqon kartaa mid walaac badan Waa hagaag, waxaa laga yaabaa inaad ka shaqeyneyso mashaariic kala duwan dad kala duwan iyo kooxo kala duwan. Laakiin ha iska ciyaarin naftaada, uma baahnid inaad ahaato mid madaxbanaan Si tan ay kugu dhacdo adiga, qof kasta oo barnaamij ama naqshadeeya markasta fikrado ayaa ku jira dhuumaha oo mid kasta oo ka mid ah sida caadiga ah wuxuu la jiraa koox iyo ujeedo kale.
Haddii aan dooneyno inaan ku cusbooneysiino dhammaan mashaariicdan iskaashigooda u dhigma anagoo aan ku dhiman isku dayga, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho maareeye mashruuc, hadday suurtagal tahayna, waxay sidoo kale la falgaleysaa galkayaga. Adeegsiga maareeye mashruuc wuxuu sahli karaa maalinteenna maalinba maalinta ka dambaysa hab aad u weynHagaag, hadii sifiican loo qorsheeyay, waxwalba si toos ah ayey usameyn kartaa, marka laga reebo shaqada.
Maamulaha mashruuc ayaa kaa caawin kara inaad maamusho:
Istaatistikada iyo boqolleyda
Taariikhaha iyo Bixinta
Emailada otomaatiga ah
Waxyaabaha maalinlaha ah ee a banaan, hubaal waqti ayey naga qaataan oo waxay isiiyaan madax-diirimaad.
Sidee loo helaa maareeye mashruuc?
Maanta, dukaan kasta oo internetka ah qoraallada php Waxaad ka heli doontaa maamule mashruuc mashruuc dhaqaale ama ka yar. Marka la gaaro waxaan u baahan doonaa oo keliya:
Macluumaad dheeri ah | 15 sababood oo aad ku noqon karto naqshadeeye madaxbanaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » PHP » Maamulaha Mashruuca iskaa wax u qabso
Tusaale dukaan kasta oo qoraal php ah waa ...
Waxaan dhihi lahaa Codecanyon waa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu caansan ...
Jawaab Sergio Ródenas
Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan ogaado meesha php script lagu kaydiyo dadka ku iibsadaan waxa noocaas ah.
Wojoscripts waa degel aad shaki la'aan ka heli karto dhammaan noocyada qoraallada ...